प्रतिपक्षी दलहरू सकारात्मक छन्, मुख्यमन्त्रीले नै ढिला गर्नुभयो| Nepal Pati
प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानी एक महिनाभित्र टुंगो लाग्छ
कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोकेपनि अन्य प्रदेशले अहिलेसम्म प्रदेश सभामा विषय प्रदेश समेत गराएका छैनन् । प्रदेश ३, ५ र ७ ले नाम र स्थायी राजधानी अध्ययनका लागि संसदीय समिति बनाएर काम अगाडि बढाएका छन् । तर, प्रदेश १ र २ ले भने संसदीय समिति समेत बनाएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश २ सभाका सभामुख सरोज कुमार यादवसँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।
प्रदेश २ सभाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे किन चासो राखेन ?
खासमा त यो प्रश्न प्रदेश सरकारसँग सोध्नुपर्ने हो ।
ठिक छ, सरकारलाई सोधौँला, सभामुखको हैसियतामा तपाईको पनि भूमिका त हुन्छ नि ?
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे सरकारबाट प्रस्ताव आउनुपर्छ । मुख्यमन्त्री र अरु मन्त्रीसँग मैले पटक–पटक कुरा गरेको छु । सवभन्दा पहिला स्थायी राजधानी र नामको विषय टुंगो लगाउँ भनेको छु । सुरुदेखि नै मैले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु । सायद, एक महिनासम्म स्थायी राजधानी र नामको विषय टुंगो लाग्छ होला ।
फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार बहुमतमा छ । तर सरकारले प्रस्ताव समेत ल्याउन सकेन किन ?
प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको सरकार छ । अहिलेसम्म एमाले, माओवादी (नेकपा) र कांग्रेसको भूमिका पनि सकारात्मक छ । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने हिसावले उहाँहरूले पनि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । नाम र स्थायी राजधानीबारे चाँडो प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।
सवैको सहयोग हुँदा त झन छिटो प्रस्ताव आउनुपर्ने होइन र ?
यो त सरकारले ल्याउनुपर्ने विधेयक हो । सरकारको तर्फबाट केही कमिकमजोरी भएको छ । किन ढिला भयो भन्ने त मुख्यमन्त्रीलाई नै थाहा होला । मलाई पूर्ण विश्वास छ–प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धि विधेयक सर्वसम्मत पारित हुन्छ ।
तपाईले सर्वसम्मत पारित हुन्छ भन्नुभयो । तर, चर्चामा रहेका नाम धेरै छन्, दलहरूले त्यहाँ पनि राजनीति पनि गर्लान नि ?
सरकार र प्रतिपक्षी दलहरू बीच कुराकानी भइरहेको छ । मैले बुझेसम्म नाम र राजधानीको प्रस्ताव सर्वसम्मत नै पारित हुन्छ । फेरि अहिलेसम्मका ११ वटै विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । अव पनि विधेयक सर्वसम्मत नै पारित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
यस विषयमा तपाईले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो ?
एक पटकमात्र होइन, धेरै पटक मैले कुरा गरेको छु । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘चाँडै पठाउँछु’ तर अहिलेसम्म प्रस्ताव प्रदेश सभामा आएको छैन् ।
मुख्य समस्या नामका हो कि राजधानीमा ?
राजधानीमा त्यति धेरै विवाद जस्तो देखिदैन, नाममा चाहिँ केही मिलाउनुपर्ने जस्तो देखिएको छ । सहमतिमा ती विषय टुंगिन्छन भन्ने लाग्छ ।
प्रसंग बदलौँ, प्रदेश सभा २ छिर्न लाग्दा फोहोरको डंगुर देखिन्छ, गुट्का खाएर थुकेको र चुरोटका बिडीले समस्या नै पार्छ भनेर स्वयं सांसदले समेत गुनासो गरेको सुनिन्छ । तपाईको ध्यान त्यता पुगेको छ ?
यस विषयमा मलाई थाहा छैन । तर, म दावीका साथ भन्छु– सात वटै प्रदेशमध्ये सवैभन्दा सफा, सवैभन्दा व्यवस्थित प्रदेश २ सभा छ । तपाई आफैँ सवै प्रदेश हेर्नुहोस्, अनि प्रश्न गर्नुहोला । बिहान उठेर चारै तिर म आफैँ हेर्छु । ट्वाइलेट सफा छ कि छैन भनेर समेत म आफैँ हेर्छु । कर्मचारीको समेत भर नपरी आफैँ हेरेको हुन्छु । अरुले गलत गरेपनि नाम मेरै आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो । त्यसकारण म सचेत भएर सरसफाइको विषय पनि हेरिरहेको छु । चुरोट र गुटका मधेसमा बढी खाने चलन पनि छ । बाटोमा चुरोट कसैले खायो होला, त्यो त मैले देखेको छैन । तर, प्रदेश सभा भित्र त्यस्तो केही पनि पाउनुहुन्नँ । तपाईले चारैतिर हेर्नुहोला– त्यसपछि थाहा पाउनुहुनेछ, कति व्यवस्थित, कति राम्रो छ ।
समग्र प्रदेशको विकासका लागि तपाईको सुझाव के छ ?
तपाई हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न सक्नुहुन्छ ? संघीय सरकारले प्रदेशलाई त्यस्तै गरेको छ । सवभन्दा पहिला केन्द्र सरकारको दिल ठूलो हुनुपर्छ । संघीयता भएपछि प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय भएन भने काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ । प्रदेश सरकार काम गर्न लागिपरेको छ । तर, केन्द्रबाट आवश्यक सहयोग भएको छैन् । केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ ।
बोक्सीको नाममा, दाइजो नल्याएको निहुँमा यातना भोग्नुपर्ने समस्या अहिलेपनि छ । त्यसतर्फ तपाईहरू कति सचेत हुनुहुन्छ ?
दाइजो र बोक्सीको नाममा यातना भोग्नुपर्ने समस्या अहिले धेरै कम भइसकेको छ । हामी सचेत भएर जनचेतना फैलाउने काममा लागिरहेका छौँ ।
मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरूले देखेको सपना पुरा गर्ने बाटोमा तपाईहरू लाग्नुभएको छ त ?
शहीद र घाइतेहरूले देखेको सपनाभन्दा हाम्रो सपना भिन्न छैन् । हामी इमान्दारिताको साथ लागेका छौँ । तर, प्रदेशले मात्रै गरेर सम्भव हुँदैन । केन्द्र सरकारको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रदेश २ को मात्र होइन, सात वटै प्रदेशको विकास हुनपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यसका लागि केन्द्रले अधिकार दिनुपर्छ र निगरानी पनि गर्नुपर्छ ।